Rehefa avy nitety an’i Eoropa: hanolotra seho tokana eto ry Malagasy guitar masters - ewa.mg
News - Rehefa avy nitety an’i Eoropa: hanolotra seho tokana eto ry Malagasy guitar masters
Sambany hiaka-tsehatra eto an-tanindrazana ny Malagasy guitar masters, hatramin’ny niandohan’ity taona ity. Ny alakamisy 25 jolay izao ny fotoana, etsy amin’ny Piment café etsy Behoririka, ao anatin’ny « cabaret », araka ny hetsika ahafantarana ity toerana ity. Azo lazaina ho miavaka amin’izay fampisehoana sy seho mozika, ny amin’io faran’ny herinandro io, ity.
Tsy fahita matetika eto an-tanindrazana ny tarika, izay efa manana ny lazany any ivelany any sy mitety faritra maro. Araka ny fantatra, miisa 12 eo ho eo ny toerana notsidihin’izy ireo sy nanaovany fampisehoana, nandritra iny volana mey sy volana jona iny. Tsy nataon’izy ireo diso anjara ny mpankafy eto an-toerana, mandritra ny fandalovan’izy ireo eto.
Raha tsiahivina, tarika ahitana mpikambana telo, samy havanana sy manana ny maha izy azy eo amin’ny fitendrena gitara, ny Malagasy guitar masters. Tsy iza izany fa i Teta, i Chrysanto Zama ary i Rija Randrianivosoa, izay nisolo an’i Joël Rabesolo. Ankoatra ny fitetezana firenena, efa namoaka rakikira, mitondra ny lohateny hoe « Volo hazo », ny tarika.
Ny mampiavaka azy ireo, ny fahaizan’ny tsirairay mamoaka ny talentany sy mametraka ny « soniany », izay sady mifameno. Eo koa ny fahaizan’izy ireo mampifanaraka ny mozika malagasy amin’ny fironana ankehitriny. Fotoana iray ankafizana izany rehetra izany io amin’ny alakamisy io, izay inoana fa hahaliana ny maro.
L’article Rehefa avy nitety an’i Eoropa: hanolotra seho tokana eto ry Malagasy guitar masters a été récupéré chez Newsmada.
Manaitra ny mpitantana ny oniversiten’Antananarivo: misy maka ny tany hanorenana « chapelle » eny Ambatomaro
Nanao antso ho an’ny mpiandraikitra ny oniversiten’Antananarivo ny mpianatra eny amin’ny cité Ambatomaro fa misy naka indray ny tany tokony ho nanorenana “chapelle” ho an’ny Aumônerie protestante universitaire. Efa nangataka ny tany mirefy 22 m tsy mivadimandry amin’ny 10 m tsy mivadimandry eny anivon’ny mpiandraikitra ny minisiteran’ny Fampianarana ambony sy ny CrouA ny mpianatra. Azo avokoa ny fankatoavana ary vonona ny taratasy samihafa ahafahana manomboka ny fanorenana. Nosantarina ny volana aogositra teo ny ady fototra. Amin’izao fotoana izao, misy andian’olona mipetraka eo amin’ny manodidina ihany milaza fa tompon’ny tany, araka ny fanazavan’ny mpikambana ao amin’ny Aumonerie protestante sady mpianatra eny amin’ny oniversiten’Antananarivo, i Fanomezantsoa Rija. Nanao hetsika ho fanoherana izany fakana tany izany ny mpianatra monina eny amin’ny cité Ambatomaro. Ny mampalahelo azy ireo, misy tomponandraikitra ao amin’ny CrouA miaraka amin’ireo milaza ho tompon’ny tany nefa tokony hijery ny tombontsoan’ny mpianatra aloha ny CrouA. Hijanona ho fotodrafitrasan’ny oniversite sy ny mpianatra hifandimby hipetraka eny ny “chapelle”. Misy ny dingana efa vita nitondrana ny olana teny anivon’ny fiadidiana ny oniversite ary nilaza ny tomponandraikitra fa hijery ifotony izany. Manahy ny mpianatra fa mitombo an-dalana ny fakana ampahan-tany tokony hanorenana “chapelle” ka manaitra ny filohan’ny oniversiten’Antananarivo. Vonjy A.
Manome tolotra manokana ny mpanjifa ny banky BFV-SG, hanamora ny fiatrehana ny fotoana samihafa amin’izao faran’ny taona 2018 izao. Nanomboka tamin’ity volana desambra ity izany, hatramin’ny 10 febroary 2019. Maro ny tolotra azo isafidianana, ao anatin’ny findramam-bola Soafeno. Toy ny Soafeno Maika, natao ho an’ny mila vola tampoka, na sendra tratry ny vonjitaitra. Eo koa ny Soafeno express, hiantohana ny fianarana sy ny kojaokoja ilain’ny mpianatra, ny hanatanterahana fotoan-dehibe (fanambadiana, kojakoja ao an-trano, …). Ahafahana mividy fiara na moto ihany kosa ny Soafeno Auto-moto.Mampiavaka ity tolotra manokana faran’ny taona ity, ny fampihenana tarehimarika roa ny tahan’ny zana-bola mihoatra amin’ny mahazatra. Hivaly ao anatin’ny 48 ora ny fangatahana. Hita manerana ny masoivohon’ny BFV-SG rehetra ity tolotra manokana ity sady sahaza ny sokajina mpanjifa manontolo. Azo atao ny mangataka fanapim-panazavana any amin’ny masoivoho tsirairay.Njaka A. L’article BFV-SG: tolotra manokana ho an’ny faran’ny taona a été récupéré chez Newsmada.
Fiatrehan’ny Barea ny “Can 2019”: ho fantatra anio ny valin-tenin’i Dax
Nandefa taratasy ho an’ny “comité de normalisation” Andriamirado Arohasina (Dax), mpilalaon’ny Kaizer Chiefs Afrika Atsimo fa tsy hanatevin-daharana ny Barea de Madagascar, eo amin’ny fiatrehana ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika “Can 2019”. Nosoratany ny 7 septambra 2018 izany, fony mbola teo ny biraon’ny FMF. Nitatitra izany tamin’ny mpanao gazety, omaly, ny filohan’ity komity ity, i Atallah Béatrice, tetsy Isoraka.Manoloana izany, mangataka an’i Dax hanao fanambarana ofisialy amin’ny vahoaka malagasy ny “comité de normalisation” sy ny filohan’ny Fosa Jr Boeny, klioba nilalaovan’i Dax, teo aloha, ny amin’ny fahavononany hilalao na tsia ao amin’ny Barea. Maro ireo mpankafy baolina kitra mangataka ny hiantsoana an’i Dax, hanatevina ny ekipam-pirenena, saingy mazava izao fa tsy mazoto ny tenany. Ankoatra izany, efa nisy ny olana teo amin’i Dax sy ny mpitantana eo anivon’ny federasiona ary ny Fosa Jr, tamin’ny nandehanany nilalao atsy Afrika Atsimo. Mety ho anton’izany io zava-nisy io ka nahatonga an’i Dax nanapa-kevitra tsy ho ao amin’ny Barea de Madagascar. Marihina fa anisan’ireo mpilalao nolazain’i Nicolas Dupuis ho mahay ary manana ny toerany ao anaty ekipam-pirenena i Dax.Etsy andaniny, fantatra fa ho avy eto Madagasikaraa i Dupuis, hijery sy hiresaka amin’ireo mpanazatra malagasy, momba ireo mpilalao dimy hantsoina hanampy ny Barea hiatrika ny “Can 2019”. TompondakaL’article Fiatrehan’ny Barea ny “Can 2019”: ho fantatra anio ny valin-tenin’i Dax a été récupéré chez Newsmada.
Après match : Des rues noires de monde
Il a fallu jouer des coudes pour sortir du stadium de Barikadimy après le match des Barea. Et le mot n’est pas trop fort pour qualifier cette marée humaine prendre d’assaut toutes les rues par où passent les Barea. Des héros que tout le monde voulait voir. Autant dire que les Tamataviens étaient fiers de ces Barea qui ont vraiment mouillé le maillot et tenu tête à des Ivoiriens théoriquement supérieurs. Mais la première haie d’honneur était pour le Président Andry Rajoelina grâce à qui la ville a pu se doter d’un stade aux normes internationales. C’était tellement bien fait au point de faire dire au capitaine ivoirien Serge Aurier que les conditions incluant également l’hôtel Le Calypso étaient réunies pour rendre leur séjour agréable. Clément RABARY L’article Après match : Des rues noires de monde est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Après match : Des rues noires de monde a été récupéré chez Midi Madagasikara.
5% monja amin’ny mponina any ambanivohitra eto Madagasikara izao ny mahazo herinaratra mivantana na eo aza ireo loharanon’angovo azo havaozina toy masoandro, ny rivotra sy ny rano.Orinasa telo eto Madagasikara nampian’ny governemanta amerikanina, amin’ny alàlan’ny USAID, sampandraharaha amerikanina misahana ny fampandrosoana, sy ny tetikasa Power Africa. Mitentina 1,2 tapitrisa dolara ny tetikasa, hamokarana angovo avy amin’ny herin’ny masoandro. Tanjona ny hahazoan’ny tokantrano mihoatra ny 400 000 any ambanivohitra herinaratra amin’ny taona 2022. Voakasik’izany ny faritra telo: Amoron’i Mania, Atsimo Andrefana, ary i Boeny.Orinasa 17 ny nanao fangatahana, telo ireo nahazo izany taorian’ny safidy: ny Autarsys Madagascar, ny Hydro Ingenierie Etudes et Realizations (HIER) ary ny Henri Fraise Fils & Cie.Tanjona ny 50 % hahazo herinaratra amin’ny 2023Ny volana mey 2020 no natomboky ny Power Africa ny tetikasa fampiroboroboana ny tambajotra madinika eto Madagasikara. Tetikasa tantanan’ny Power Africa’s Southern Africa Energy Program (SAEP) manampy ireo nahazo alalana avy amin’ny Ader, saingy sahirana amin’ny fitadiavana famatsiam-bola; misy koa ireo mpandraharaha manana tetibola afaka manampy tokantrano vaovao hafa. Manohana ny tanjon’ny fanjakana ny tetikasa, hahatratra 50% amin’ny fahazoana herinaratra manerana ny Nosy amin’ny taona 2023.Manampy amin’ny fanitarana ny fiharianaRehefa mitombo ny fampiasana izany, afaka mampiasa fitaovana sy milina maoderina ny orinasa, toy ny paompy fitarihan-drano sy ny vata fampangatsiahana. Manampy amin’ny fanitarana ny fihariana ireo, sy famoronana asa vaovao hampandroso ny orinasa sy ny faritra. Manampy amin’ny fanamafisana ny fifandraisana varotra sy ny toekarena, sy ny fampiroboroboana ny fizakantena maharitra ny fahazoana herinaratra eto Madagasikara. R.Mathieu L’article Herinaratra: 1,2 tapitrisa dolara avy amin’ny USAID a été récupéré chez Newsmada.
Fanolanana : Vehivavy efa manambady nanaovan-drainy herisetra ara-nofo
Zava-doza ary efa tena tsy fampiseho masoandro ity nitranga tany amin’ny faritra Vakinankaratra ity. Raim-pianakaviana iray no notorian’ny zanany vavy teo anivon’ny polisy misahana ny zaza tsy ampy taona (PMPM) ao Antsirabe fa nanolana azy. Araka ny loharanom-baovao dia efa manambady ity vehivavy ity nefa dia mbola sahin’ity rangahy ity ny nanao azy izany fomba ratsy izany raha sendra nivahiny tao aminy ity zanany ity. Nambaran’ity mpitory moa fa efa tany amin’ny taona 2003 tany no nanaovan-drainy azy izany raha mbola kely izy tamin’izany. Voatery nangina hono izy tamin’izany fotoana izay fa natahotra. Tsara anefa no manamarika fa tena heloka bevava izao nataon-drainy izao satria ankoatry ny fanaovana herisetra amin’ny zaza tsy ampy taona, dia mbola sazian’ny lalàna ihany koa ilay fifoterana amin’ny fianakaviana. Ny polisy miaro ny zaza tsy ampy taona (PMPM) Antsirabe no nisahana ny fanadihadiana. Ano moa no natolotra ny fitsarana ny raharaha ka andrasana izay ho vokany. T.M. L’article Fanolanana : Vehivavy efa manambady nanaovan-drainy herisetra ara-nofo est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Fanolanana : Vehivavy efa manambady nanaovan-drainy herisetra ara-nofo a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Mba tsy hampitombo ny takaitran’ilay niharan’ny herisetra. Mpanao gazety avy amin’ny haino vaky jery aman-tranokala miisa 20 avy eto Antananarivo no nahazo fiofanana avy amin’ny UNICEF momba ny herisetra mifototra amin’ny maha lahy sy maha vavy sy herisetra atao amin’ny ankizy. Ny 16 sy ny 17 novambra 2020 teny Antaninarenina no nanatanterahina izany. “Ny haino vaky jery aman-tranokala dia sehatra iray ahafahana mandefa vaovao sy mampita hafatra mba handraisana anjara amin’ny fanabeazana ny vahoaka Malagasy amin’ny lohahevitra tena ilaina toy ny herisetra mifototra amin’ny maha lahy sy maha vavy, ny herisetra atao amin’ny ankizy. Tafiditra ao anatin’ny sahan’asa momba ny hetsika 16 andro iadiana amin’ny herisetra mifototra amin’ny maha lahy sy maha vavy izay hanomboka ny 25 novambra ary hifarana ny 10 desambra 2020 ity fiofanana ity”, hoy ny mampiofana Rossella Albertini, manam-pahaizana manokana momba ny maha lahy sy maha vavy avy ao amin’ny UNICEF Madagasikara. Nambarany fa nifanandrify tamin’ny tranga niseho matetika, herinandro lasa, tamin’ny haino vaky jery aman-tranokala momba ny herisetra mifototra amin’ny maha lahy sy maha vavy sy herisetra ara-nofo atao amin’ny ankizy ihany koa ity fampiofanana mpanao gazety ity. Noho izany, “tena ilaina ny fiofanana hampitàna ireo vaovao tokony alefa sy ampahafantarana ny fanararaotana ara-nofo atao amin’ny ankizy sy ny vehivavy ary koa ampahafantarana amin’ny vahoaka ireo ivon-toerana mandray an-tanana izany”, hoy izy. Nandritra ny fiofanana dia voalaza fa tomponandraikitra ny mpanao gazety satria mety hampitombo ny takaitra mahazo ilay niharan’ny herisetra indray ny lahatsoratra na fanadihadiana nataony. Ho fisorohana izany ihany koa no anisany zava-kendreny ny fiofanana nomen’ny UNICEF. Lynda A. Cet article UNICEF: Ny tokony ataon’ny mpanao gazety manoloana ny herisetra atao amin’ny vehivavy sy ny ankizy est apparu en premier sur déliremadagascar.L’article UNICEF: Ny tokony ataon’ny mpanao gazety manoloana ny herisetra atao amin’ny vehivavy sy ny ankizy a été récupéré chez Délire Madagascar.
Ao anatin’ny velirano faha-11 nataon’ny filoha Rajoelina Andry ny fampiroboroboana ny trano fonenana sy ny fampandrosoana an’i Madagasikara. Napetraka ny Antokon-draharaha nasionaly hanohanana ny trano fonenana (Analogh), orinasam-panjakana eo ambany fiahian’ny minisiteran’ny Fanajariana ny tany sy ny asa vaventy (MTTP), sady miara-miasa amin’ny minisitera lefitra miadidy ny Tanàn-dehibe vaovao sy ny trano fonenana (VMVNH). Ny antony, ny hanatanterahana ny Politikam-pirenena mikasika ny trano fonenana.Tanjon’ny Analogh ny hiantoka ny ahazoan’ny tokantrano malagasy trano fonenana sahaza, hampihenana ny fahantrana sy hanatsarana ny fari-piainany. Maro, araka izany, ny tetikasa hanorenana trano fonenana manerana ny Nosy amin’izao fotoana izao.Natao, omaly, ny sonian’ny fifanarahana eo amin’ny Analogh, ny banky BNI Madagasikara ary ny Tahirim-pirenena misahana ny fiahiana sosialy (CNaPS). Hita taratra amin’ity fiaraha-miasan’ny fanjakana sy ny tsy miankina ity ny fanatanterahana ny Politikam-pirenena ho an’ny trano fonenana (3P).Nilaza ny tale jeneralin’ny CNaPS, Rakotondraibe Mamy, fa anisan’ny tanjona ao anatin’ity fifanarahana ity ny ahazoan’ny mpikambana ao amin’ny CNaPS, mahazo trano fonenana. aorin’ny Analogh.Amin’ny alalan’ny banky BNI no ahafahan’ny mpikambana mindram-bola, hividianana ny trano.Njaka A.L’article Fiaraha-miasa 3P: trano fonenana ho an’ny mpikambana Cnaps a été récupéré chez Newsmada.
Commune rurale de Fiaferana : Les lauréats au baccalauréat, BEPC et CEPE récompensés
Le maire de la commune rurale de Fiaferana dans le district d’Antananarivo, Andrianaho Ratovelomanana a récompensé les lauréats au BEPC, au CEPE et au baccalauréat de sa commune. Pour cela, ces enfants ont reçu des attestations, des médailles, et une enveloppe. Outre les trois lauréats, le maire a aussi tenu à féliciter 14 nouveaux bacheliers en leur remettant des médailles. Par ailleurs, la commune comptait également quatre écoles qui ont obtenu un résultat de 100% à l’examen du CEPE, ce qui a particulièrement ravi le maire de la commune qui a d’ailleurs financé le repas des enfants durant le dernier examen du CEPE. Il a par ailleurs promis de suivre de près la scolarité de ces enfants en cherchant des moyens pour les aider. Anja RANDRIAMAHEFA L’article Commune rurale de Fiaferana : Les lauréats au baccalauréat, BEPC et CEPE récompensés est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Commune rurale de Fiaferana : Les lauréats au baccalauréat, BEPC et CEPE récompensés a été récupéré chez Midi Madagasikara.